Cusub Martech Zone Logo 2019 | Martech Zone
Mid ka mid ah aagagga aanan maalgashi ku sameysneyn ayaa ah boggan. Halka aniga hay'adda waxay lahayd astaan ​​weyn oo aan jeclahay, waxaanan la shaqeynaa dhammaan macaamiisheenna ku saabsan astaantooda, kaliya ma aanan haysan baaxadda ballaadh ee aan kaga shaqeeyo Martech Zone sumadda… ilaa maanta.
Astaantii hore ee "M" waxay asal ahaan ahayd waxyar oo wax laga beddelay sawir aan ku soo iibsaday si deg deg ah ka dib markii aan beddelay bogga. Waxay ahayd wax iska cad, mana matalin wax, waxayna i dhibtay markasta oo aan arko.
Naqshadeeyaha ka shaqeeyay DK New Media logo wuxuu arkay in wakaaladeena ay ku shaqeysay siyaabo gaar ah oo hal abuur leh si loogu kordhiyo natiijooyinka macaamiisheena. Calaamaduhu runti waa xayeysiin dhanka bidix ah iyo k dhanka midig, laakiin wadooyin u gaar ah oo taageeraya falaar kore.
Waxaan waligay taageere buluug u ahaa astaanteyda sidoo kale, waa qabow, dejin, iyo kalsooni. Marka, halkii aad ka bilaabi lahayd xoqdo leh astaan ​​cusub oo loogu talagalay Martech Zone, Waxaan kala jarjaray oo aan isku soo uruuriyey DK New Media astaan. Isbarbardhiggu waa muhiim sidaan rabo inaan u calaamadeeyo hay'adda iyo baloog isku mid ah.
Ma noqon karto wax iska cad, laakiin astaanta ayaa isku dhafan m, t, iyo z… si ay u calaamadeyso marteh zmid. Waxaan ku raaxeystay qoritaanka daraasiin tusaalooyin ah ka hor intaanan u boodin sawirqaadaha oo aan dhiso. Wali waxoogaa caado ah ma ahan, sidaa darteed waxaan aaminsanahay inay wakiil ka tahay balooggan.
Astaamaha oo ay weheliso, waan khafiifiyay oo aan wax ka beddelay dulucda dusheeda maryan.zone sidoo kale. Haddii aad tan ka aqrinaysid joornaalkeena, hubi inaad gujiso oo aad fiiriso. Waxaan yareeyay qadarka qoraalka, cinwaanka la hagaajiyay iyo astaamaha jirka ee akhriska oo la hagaajiyay, iyo xitaa midabbada lagu calaamadeeyay qaybaha (waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay inaan wax ka beddelo).
Mid ka mid ah himilooyinkeyga sanadkan ayaa ah inaan inbadan dhageysto oo aan runti wadahadal kula bilaabo… u badalo dhagaystayaashayda bulsho. Marka, jawaab celinta waa la soo dhoweynayaa waana la dhiirigelinayaa! Ii sheeg waxa aad jeceshahay inaad wax badan ka barato iyo sida aan u horumarin karo barta iyo boodhadhka.
Tags: brandingekspertenDK New Medialogo
WordPress: Sida loo Soo Geliyo loona Cudariyo PDF